यस्ता बच्चामा हुन्छ झनै बढी कब्जियतको जोखिम ? यसरी पाउनुहोस् छुटकारा:: Naya Nepal
यस्ता बच्चामा हुन्छ झनै बढी कब्जियतको जोखिम ? यसरी पाउनुहोस् छुटकारा
खानपान नमिल्दा वा फाइबरयुक्त खानेकुराको कमीले बच्चामा कब्जियतको समस्या देखापर्छ । अक्सर बच्चाहरु नियमित शौच गर्दैैनन् । वा त्यस्ता काममा अभिभावकले अभ्यस्त गराउँदैन । यसले पनि उनीहरुको पेट सफा हुँदैन, जो कब्जियत बन्न सक्छ ।
पानी, रेशादार फलफुल तथा सागसब्जीको अपुगका कारण पनि बालबालिकालाई कब्जियत हुने गर्दछ । कब्जियत हुदाँ ठूलो आन्द्रामा जमेर बसेको फोहर ढिलो गरी बाहिर निस्कने गर्छ।
जब ठूलो आन्द्राले राम्ररी काम गर्न सक्दैन र आन्द्रामा टासिएर बसेको फोहरलाई मलद्धारबाट बाहिर फाल्न सक्दैन । यहि अवस्थामा कब्जियत हुने गर्छ। कब्जियत भएमा बालबालिकामा विभिन्न लक्षण देखा पर्ने गर्छ।
-कडा दिशा, सुख्खा दिशा तथा दिशा गर्नमा समस्या भएमा
-मोटो तथा बाक्लो दिशा भएमा
-रगत सहितको कडा दिशा भएमा
-बच्चाको भित्री वस्त्रमा माटो जस्तो दिशा देखिएमा
सामान्यतया आन्द्रामा भएको फोहर बाहिर निस्कन नसकेका वा कम गतिमा पास भएमा कब्जियत हुने गर्दछ । कब्जियत भएमा दिसा साह्रो वा कडा हुने गर्दछ । कब्जियत हुने धेरै कारण हुन्छन्।
बालबालिका खेल्न भनेपछि हुरुक्कै हुने गर्दछन् । यतिसम्म की उनीहरु दिसा पिसाब आएको पनि थाहा पाउदैनन् र आए पनि शौचालय जान रुचाउँदैनन् । बरु रोकेरै राख्छन् । जसका कारण उनीहरुमा कब्जियतको समस्या हुन्छ।
परिवारमा कब्जियतको समस्या भएमा पनि बालबालिकालाई कब्जियष्तको समस्या हुने गर्दछ । यसको प्रमुख कारण वंशाणुगत वा एउटै परिवेश पनि हुनसक्छ ।
बलबालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएमा, पेटको समस्या भएमा , खाना नपचेमा वा खानाका एलर्जी भएमा पनि कब्जियत हुने गर्दछ ।
बालबालिकामा हुने कब्जियतको समस्या कम गर्न यी उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
बालबालिकामा कब्जियतका समस्या भएमा फलफुल, तरकारी, गेडागुडी, सिङ्गो अन्न लगायतका हाई फाइबरयुक्त तथा रेशेदार खानेकुरा ख्वाउनु पर्छ । यदी बच्चाले फाइबरयुत्त खानेकुरा आफै खानसक्दैन भने लिटो बनाएर तथा केही ग्राम फाइबरयुक्त खानेकुरा उनीहरुको खानामा मिसाएर पनि ख्वाउन सकिन्छ ।
कस्ता बालबालिकामा कब्जियत जोखिम धेरै हुन्छ ?
वीर, टिचिङ र बिपी प्रतिष्ठानका आवासीय चिकित्सकले ओपिडी सेवा बहिष्कार गर्ने
काठमाडौँ- तीन वटा मेडिकल शिक्षण संस्थाका आवासीय चिकित्सकहरूले डा गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै ओपिडी सेवा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन्।
सोमबार साँझमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल (न्याम्स) र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आवासीय चिकित्सकहरूले ओपिडी सेवा बहिष्कारको निर्णय गरेका हुन्।
डा केसीले अनसन सुरु गरेको सोमबार २२ दिन बित्दा पनि माग पूरा गर्न सरकारले गैरजिम्मेवारी पन र असंवेदनशीलता देखाएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरूले चरणवद्ध रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दै आएका छन्।
ओपिडी सेवा बन्द गर्नुका साथै आवासीय चिकित्सकहरूले कालोपट्टीसहित धर्नाका विभिन्न कार्यक्रमसमेत संचालन गरिने बताएका छन्। तर कोभिड, इमर्जेन्सी तथा इन्डोर सेवा अवरोध नगरिए पनि कालोपट्टी बाँधी सेवा प्रवाह गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
डा केसीको जीवन रक्षाका लागि वार्ता टोली गठन गरी तत्काल उनका माग पूरा गर्न समेत उनीहरूले माग गरेका छन्। सरकारले तत्काल डा केसीका माग पूरा नगरे थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने र त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनीहरूको चेतावनी समेत छ।
डा केसी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनसनरत छन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएपनि सरकारले भने उनका माग र अनसनप्रति कुनै चासो देखाएको छैन।